Rakoto Andrianirina Fetison: “Mila miara-mitady vahaolana tsy hisian’ny korontana” | NewsMada
Rakoto Andrianirina Fetison: “Mila miara-mitady vahaolana tsy hisian’ny korontana”
“Efa ampy antsika ny korontana ateraky ny Covid-19, tsy tokony hampiana korontana hafa intsony. Tokony hiara-mitady vahaolana isika handresena izany. Samy mety avokoa ny hevitra entina, fa ny fiantraikany eo amin’ny isam-baravarana sy ny isam-batan’olona no zava-dehibe.” hoy ny filohan’ny antoko RDS, Rakoto Andrianirina Fetison. Tokony hijery mandrakariva ny mpitondra hoe: ahoana no hanampiana ny vahoaka? Isaorana ny efa vita. Inona no mbola andrasana? Voafetra no azon’ny firenena malagasy, indrindra ny mpitondra, anampiana ny vahoaka. Tsy misy ny fanampiana antenaina isan’andro fa voafetra.
Mikaikaika ny vahoaka
“Ny anio aloha: ahoana no hialantsika sy handresentsika izany Covid-19 izany?“, hoy izy. Satria mikaikaika ny vahoaka, ary tena atahorana ny fitongangan’ny toekarena, ny fahasahiranana aterak’izany. Ny tokantrano salasalany, mihasahirana; ny efa mahantra, mety hiantraika amin’ny fahafatesana. Mety hitarika korontana eto amin’ny tany sy ny firenena izany.
Na iza na iza mpitondra eo, na inona na inona fahaizana: tsy mora ny miady amin’io valanaretina io. Izay no miteraka fisalasalana, mahatonga ny olon-drehetra mitady sy hanolo-kevitra hanampiana ny mpitondra hiatrehana ny ady. Anisan’izany ny firaisamonina sivily, ny mpanao politika, ny fikambanana…
Zava-doza ny voka-dratsin’ny fiparitahan’io valanaretina io. Ny lafiny sosialy sy toekarena efa tsy zarizary talohan’izany, vao mainka manampy trotraka ny fiantraikany. Na ny fepetra ara-pahasalamana izany, indrindra ny hamehana ara-pahasalamana takina. Tsy midika hoe tsy mety izany, fa voatery tsy maintsy atao mba tsy hiparitaka sy hanenika an’i Madagasikara ny valanaretina.